Akụkọ - N’afọ 5G, a ga-enwe nnukwu mgbanwe n’ọhịa ndị a
E jiri ya tụnyere teknụzụ nkwukọrịta ọdịnala, 5G nwere arụmọrụ siri ike karị, ọtụtụ ihe nkiri na usoro ọmụmụ ọhụrụ, nke nwere ike izute ngwa chọrọ nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka ngwa ọdịnala maka netwọdụ ikuku na mgbanwe nke imepụta ọgụgụ isi, na ịchụpụ teknụzụ ozi, teknụzụ imepụta, teknụzụ ihe ọhụụ. na ohuru ike technology ka ọtụtụ ebe banye niile ubi nke electronic n'ichepụta, si otú eduga isi na nkà na ụzụ mgbanwe na ụlọ ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, site na nkwado nke ntanetị 5G na ọsọ ọsọ ọsọ, obere oge, ikike ka ukwuu na ntụkwasị obi dị elu, ngwa ngbacha ihu n'ọhịa nke ule elele na elele elektrọnik, dịka ebili mmiri millimita, MIMO buru ibu na ime mgbanwe mgbatị, bụ na-atụ anya ka ọ bụrụ eziokwu, nke doro anya ga-achọ imeziwanye nzi ezi na arụmọrụ nke ule eletrik na mmụba.
Na mpaghara nke ụgbọala, ekwentị mkpanaaka, ngwa ụlọ, akụrụngwa weara, ngwa ụlọ ọrụ na injinia, ngwa teknụzụ 5G bụ nke zuru oke ma dị omimi N'ime igwe okwu nkwukọrịta nke nkwukọrịta, modulu nkwukọrịta, antenna, redio ugboro, wdg nke teknụzụ 5G na-akwado, teknụzụ 5G ga-eweta ike ọhụrụ na mpaghara ụlọ ọrụ mmepụta ihe ndị a. Dịka ọmụmaatụ, na ụlọ ọrụ SMT, na-erite uru site na mmụba na-arịwanye elu nke teknụzụ 5g maka ngwa ngwa na ngwa ngwa ngwa ngwa, PCB na-achọ iweta ọnọdụ dị mma nke ịrị elu olu na ọnụahịa; ngwa nke 5G base station na 5G ekwentị mkpanaaka, gụnyere igwe elektrọnik, ga-eweta ụgbọelu dị ukwuu, ọnụọgụ ugboro ole, ọnụọgụ ọkụ na teknụzụ ndị ọzọ, nke mere na R & D nke ihe nkwukọrịta dị n'etiti poolu RF n'ihu na baseband chip ịzụlite ngwa ngwa; na sistemụ kọmputa nke 5G Manufacturing na-akwado nwere ike ime ka usoro mmepụta ahụ bụrụ nke ziri ezi, nke dị iche iche na nke dị ala, yana ụlọ ọrụ ndị nwere ọgụgụ isi na ụlọ ọrụ mmepụta ihe ga-eweta nnukwu uru. Enwere ike ịhụ na 5G na-eji uru ndị a na-enweghị atụ iji mee ka ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na kọmputa na-arụ ọrụ na-aga n'ihu na nke ọma na ọnọdụ dị iche iche, nke ga-enyere ụlọ ọrụ nrụpụta eletriki aka iji melite ọnọdụ ọrụ, belata ntinye aka nke usoro mmepụta, na nke ukwuu melite njikwa nke usoro mmeputa.
Nrụpụta ọgụgụ isi dị njikere ịmalite ụlọ ọrụ nkwado 5G gaa n'okporo ụzọ ọsọ ọsọ
Na mgbakwunye na ụlọ ọrụ mmepụta kọmputa, 5G nwere ike mezuo mkpa nke njikọta akụrụngwa na ngwa mmekọrịta dịpụrụ adịpụ na gburugburu ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Oghere nke ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi nke Internet nke ihe, njikwa akpaaka mmepụta ihe, igwe ojii igwe ojii, wdg ga-emepe oge ọhụrụ nke njikọta ihe niile na mmekọrịta mmadụ na kọmputa nke miri emi tupu oge eruo site na nkwado nke teknụzụ 5G.
Dịka teknụzụ na-akwado nkwado maka ijikọ ndị mmadụ, igwe na akụrụngwa, ịntanetị nke ihe na teknụzụ 5G bụ mmekọrịta na-arụkọ ọrụ. Ngwa nke Internetntanetị nke ihe na-adabere na 5G iji nye ọnọdụ dị iche iche nke ngwọta njikọ njikọta, na ntozu oke nke ụkpụrụ teknụzụ 5G chọkwara mkpali na nkwalite nke Internet nke ihe. Akpaaka akara bụ ihe kasị mkpa ngwa na ọgụgụ isi n'ichepụta osisi. Isi usoro ya chọrọ nkenke zuru oke, obere oge na nkwukọrịta usoro dị elu a pụrụ ịdabere na ya. Naanị 5G na-eme ka ngwa nchịkwa mmechi mechiri emechi omume site na njikọ netwọk ikuku.
N'otu oge ahụ, n'otu oge nke Nepcon China, nke a ga - eme na Eprel 24-26, ụlọ ọrụ nwere ọgụgụ isi na ihe ngosi teknụzụ akpaaka ga - ebupụta "smart Manufactork DreamWorks" mmepụta akara 2.0, nke bụ usoro imepụta ezigbo iji gosipụta ike dị ike. usoro mmekorita nke mmekorita nke ihe eji emeputa ihe. Mezue ahaziri electronic ngwaahịa nzukọ iji si zuru electronic ngwaahịa mmepụta usoro nke na-na saịtị ezigbo oge iji pụrụ isi chọta, akụrụngwa arịọnụ, shei nzukọ na akpaka ule.
Na akụkụ nke lọjistik, site na njikwa ụlọ ahịa na nkesa na-arụ ọrụ, anyị chọrọ mkpuchi sara mbara, mkpuchi miri emi, ike oriri dị ala, nnukwu njikọta, teknụzụ njikọta ọnụ ala na mkpuchi netwọkụ, na netwọkụ 5G nwere ike izute ụdị mkpa ahụ nke ọma. N'ihe mmepụta nke ọgụgụ isi, ọ na-adịkarị mkpa ka robot nwee nzukọ na ikike imekọ ihe ọnụ iji zute mmepụta na-agbanwe agbanwe, nke na-eweta robot chọrọ igwe ojii. Nkà na ụzụ 5g na-akpali ọtụtụ ọrụ kọmputa na ọrụ nchekwa data na igwe ojii, nke nwere ike belata oke ọnụ ahịa na ike nke akụrụngwa robot, ma nwee mkpa miri emi maka imepụta ihe na-agbanwe agbanwe.
O doro anya na teknụzụ 5G ga-abụ isi ihe iji kwado mgbanwe nke Nchọpụta ọgụgụ isi n'ọdịnihu. Ọ nwere ike ọ bụghị naanị iji ọtụtụ ndapụta iji jikọọ ndị mmadụ agbasasịa ma gbasasịa ndị mmadụ, igwe na akụrụngwa, wee wuo Intanet dị n'otu, kamakwa ịkwado ngwa ịntanetị niile na-eji ezigbo oge na ntụkwasị obi dị elu iji nyere aka ụlọ ọrụ na-emepụta ihe iwepụ ọgba aghara nke teknụzụ ikuku na mbụ, nke ga-enwe mmetụta dị mma na mmejuputa Ntanetị nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ntụgharị miri emi nke imepụta ọgụgụ isi ọgụgụ isi.
Site na mmalite nke Boao Forum maka Asia na Eprel 2018 ruo na njide nke ọgbakọ na-arụ ọrụ na akụ na ụba na njedebe nke afọ, 5G abụghị ihe ijuanya na ọ ga-abụ isi okwu nke afọ na ngalaba akụ na ụba. Dịka ọgbọ ọhụụ nke teknụzụ nkwukọrịta mkpanaka, 5G nwere opekata mpe ugboro 10 kachasị ọsọ nke 4G, nkwụsịtụ ọkwa nke millisecond na ikike ijeri 100 ijeri. N'okpuru iwu ya, akụ na ụba dijitalụ nke na-ekpuchi n'ịntanetị na offline, oriri na mmepụta, ikpo okwu na usoro ọmụmụ ga-enweta ike ịkwọ ụgbọala ka ukwuu. Karịsịa ụlọ ọrụ na-emepụta kọmputa, nke a na-ewere dị ka "isi siri ike" nke akụ na ụba mba, nọ na oge dị oke egwu nke mgbanwe na mmelite. Ọ chọrọ nkwado teknụzụ ọhụrụ nke 5G nọchiri anya iji nweta ọhụụ ọhụụ na uto ọhụụ, ma weta nnukwu mgbanwe na ọnọdụ mmepụta na ọnọdụ mmepe.
Anyị na-enye azịza SMT nkwụsị maka ndị na-emepụta ngwaahịa 5G, Siemens mounter, Fuji mounter, Panasonic mounter, Samsung mounter na SMT peripheral equipment, welcome to ase!